Iindlela ezisebenzayo zokuPapasha iApp yeApple kwiVenkile yokuDlala kuGoogle | Martech Zone
Eyona ndlela ilula yokuhambisa usetyenziso lwe-Android yivenkile yeGoogle Play. Yindlela encinci yokufumana uninzi lwabathengi abanokubakho. Ukuhambisa isicelo sokuqala kwiVenkile yokuDlala akunangxaki kangako, landela nje iingcebiso kunye nesicelo sakho esilungiselelwe ukukhutshelwa.
Abaphuhlisi beapps ze-Android bazabalazela ukukunika esona sicelo sisemgangathweni esinokufunyanwa ngabaphulaphuli abaninzi. Uchithe ixesha elininzi usenza isicelo, ufeza zonke izinto ezinokubakho kwaye unikezela nge-100% kwisicelo sakho. Okwangoku, lithuba elifanelekileyo lokuthumela isicelo sakho kwihlabathi. Ngaphezulu kwe-1 yezigidigidi abathengi be-Android abafumanekayo kuyo yonke indawo kwihlabathi liphela. Eli nqanaba linye liya kukusa kufutshane neqela onomdla kulo.
Kukho malunga nezigidi ezi-2.47 zezicelo ezifikelelekayo kwiVenkile yokuDlala kwaye malunga ne-3739 yezicelo zisungulwa yonke imihla.
Iinkcukacha-manani, inani leeNkqubo kwiiVenkile ze App ngo-2019
Akukho mntu unokukukhanyela ukubaluleka kunye nokufumaneka kwayo kwiVenkile yeGoogle yokuDlala kwindawo yesicelo esiselfowuni. Kwimeko apho kufuneka uyazi-ukuba ungasifaka njani isicelo kwivenkile yokudlala kaGoogle, ngelo xesha usukelo lwakho luphelela apha. Kukho uluvo lokuba kuya kufuneka uyilandele ukuze ugqithise ngokufanelekileyo usetyenziso kwivenkile yokudlala kaGoogle. Ngokuhambelana nale migca, kunjani malunga nokuqala kwethu.
Vavanya isicelo sakho -Kuqala, kuya kufuneka uvavanye isicelo sakho ngenani elifanayo leendlela kunye neepesenti ezili-100 uqiniseke ukuba iya kusebenza ngokuLungileyo, ngaphambi kokudluliselwa kwesicelo kwivenkile yokudlala. Ngokuqhelekileyo ungasebenzisa i-emulators kwesi sizathu. Sebenzisa igajethi elawulwa yi-Android iya kuzisa inkqubo yovavanyo ngokuya iba namandla. Iya kukunika amava okusebenzisa igajethi yokwenyani kwaye ikuxhobise ngokwaphula naziphi na iincukuthu.
Ubungakanani obufutshane besicelo -Xa usenza isicelo, zama ukunciphisa ubungakanani besicelo. Ubungakanani boqobo lwaso nasiphi na isicelo kubaluleke kakhulu. Abathengi abasive isidingo sokukhuphela usetyenziso oluthathe indawo enkulu kwindibano yabo yoomatshini. Ewe kunjalo, noGoogle uqobo uvumela ubungakanani besicelo ukuya kuthi ga kwi-50MB. Ukuba isicelo sakho sikhulu kakhulu, uya kufuna iingxelo zophuhliso lwe-APK ukuba yahlulahlulwe ibe ngamacandelo ukuze igqithiselwe. Kuya kufuneka ukuba uphawulwe kwiGoogle Play Console kwaye ube ngumsasazi wePlay. Ngaphandle kwento yokuba isicelo sakho sinqumle eli nqanaba lokuvalelwa, ngeloxesha kuya kufuneka usebenzise irekhodi lokwandiswa kwe-Android ye-APK, ukuthumela isicelo sakho ngokufanelekileyo. Oku kuyakuhlukanisa isicelo sakho sibe ngamacandelo kwaye ngoMeyi ukuya kuthi ga kwi-2GB, unike indawo eyongezelelweyo ye-4GB kwisicelo sakho. Ulwazi olongezelelekileyo lubekwa kwilifu likaGoogle kwaye luyafunyanwa kwakhona nangaliphi na ixesha esaziswa ngalo isicelo.
Fumana ilayisensi yeapp -Ayikukukhathaza ukufumana isicelo sakho sigunyazisiwe de uthumele isicelo sakho kwiVenkile yokudlala kuGoogle.
Gxila kwirekhodi ye-APK ene-Bundle ID kunye nenombolo yenguqulo -Udinga ukuseta ingxelo ye-APK apho unokwabela khona inombolo eyahlukileyo yesicelo sakho eya kuthi ikuncede kamva xa ufuna ukuhambisa enye ingxelo kwisicelo sakho. I-ID yePakethe nayo ibizwa ngokuba yi-ID yesicelo kwaye isetyenziselwa ukwenza isicelo esithile, yinxalenye ebalulekileyo xa usenza isicelo sakho. Oku kunokufaka isicelo ngokupheleleyo kwi-Android 5.0 okanye ngaphezulu.
Kufuneka uyityikitye iApp kunye naso sonke isiQinisekiso soKhuseleko -Lo ngumnqophiso wobungqina ophawulwe njenge-APK oya kuyifuna ngalo lonke ixesha uhambisa isicelo kwiVenkile yokudlala. Oku kubizwa ngokuba luxwebhu lweJSK olunezatifikethi, umzekelo, ibinzana eliyimfihlo leKeystore.
Yenza uluhlu lwakho lweVenkile yeapp -Ukufakwa kwesicelo licandelo elinamandla elinceda isicelo sakho ekukhetheni ukhuphelo. Ayinguye wonke umntu onika ixesha lakhe ekuthumeleni isicelo kodwa endaweni yamathuba okuba wenze oku ngaphambi kokuhamba kwesicelo se-Android, uya kufumana iziphumo ezimangalisayo. Kuya kufuneka unike idatha kubathengi malunga nokuba luhlobo luni losetyenziso kwaye ziziphi iimpawu zalo.
Amanyathelo okupapasha isicelo seGoogle kwiGoogle Play
Ngaphambi kokuthumela usetyenziso lwe-Android kuGoogle Play, qinisekisa ukuba yonke into ilungiselelwe. Uya kufuna ukubonwa kwescreen kwesicelo sakho (kwinqanaba eliphezulu), isikhokelo sesicelo kwaye, ngokucacileyo, uxwebhu lwe-APK (usetyenziso ngokwalo). Kukho izithintelo ezinzima malunga nobungakanani besicelo. Ubungakanani obugqithisileyo zii-100 Mbytes. Kuya kukhethwa ukuba ingaphezulu nje kwama-50 Mbytes, ngelo xesha abathengi abahlala kwimimandla enenethiwekhi eyoyikekayo baya kufumana ithuba lokusebenzisa isicelo sakho. Nazi iindlela zokuhambisa usetyenziso lwe-Android kuGoogle Play:
Yenza iakhawunti yoyilo -Vula iGoogle Play Console kwaye wenze iakhawunti yenjineli. Ixabisa malini ukuhambisa usetyenziso lwe-Android? Umsebenzi uxabisa i $ 25. Uhlawula kube kanye, irekhodi likunika ilungelo lokusasaza inani elifanayo lezicelo njengoko ufuna nanini na naphina.
Chwetheza isihloko kunye nokubonisa isicelo sakho -Kubulumko ukuba uyiqwalasele ngaphambi kokuyihambisa. Xa usenza uphando lokukhangela amagama wokubukela ukongeza kwisicelo sakho. Into yokuqala ayibonayo umsebenzisi ligama lesicelo, into enomdla iyanceda ekuqwalaseleni nawuphina umsebenzisi! Ujoliso kufuneka lube kwigama elonwabisayo kunye nelichazayo.
Bandakanya ukubanjwa kwescreen -Kubalulekile ukuqinisekisa ukuba umfanekiso-skrini ukwinqanaba eliphezulu. Qinisekisa ukuba imifanekiso ibonisa izinto ezithile ezingaqhelekanga ezikwisicelo sakho, okanye eyona ngcinga iphambili yesicelo.
Thatha isigqibo somxholo wesicelo sakho Okwangoku, kuya kufuneka uphendule imibuzo embalwa ukuze uthathe isigqibo malunga nenqanaba lezinto zento yakho. Kulindeleke ukuba kuthintele abantwana ekukhupheleni usetyenziso lwakho xa kunokwenzeka ukuba inemixholo yabantu abadala. Uphendula ngcono ngokungcono enye into uya kunqatshelwa ukukhupha usetyenziso lwe-Android kuGoogle Play.
Khetha udidi lwesicelo Ikwabalulekile kwimeko yokuba iphakamisa ukungangqinelani kokukhutshelwa. Xa ukhetha udidi olungafanelekanga, abantu ngekhe babenalo ukhetho lokulibona eklasini!
Lawula imiba yokhuseleko -Ukuba isicelo sisebenzisa naluphina ulwazi lwabathengi babucala kufuneka ubonakalise kwaye ubandakanye indlela yokhuseleko apho uqinisekisa ukuba awusebenzisi olu lwazi ukulungiselela inzuzo yakho. Kwiqhinga lokhuseleko kufuneka uxele abathengi ukuba loluphi ulwazi oluza kuqokelelwa, ukuba le datha iya kuphathwa njani kwaye ngubani oza kuyifumana.
Inyani yokuba iipesenti ezingama-42 zabemi behlabathi zisebenzisa imithombo yeendaba zentlalo sisizathu esaneleyo sokuba lelona qonga libalaseleyo lentengiso.
Ukuba ubucinga ukuba emva kokuba usigqithise ngokufanelekileyo isicelo kwiVenkile yokuDlala unokuphumla kwizihlahla zakho. Zininzi izinto ekufuneka zenziwe ukuya phambili! Ubomi besicelo sakho emva kokupapasha buxhomekeke kuwe (okanye kwiqela elisebenzela wena). Uninzi lwexesha, inkxaso emva kokumiliselwa ichonga ukufikelela kwesicelo kunye nokuba iluncedo kangakanani kubasebenzisi.
Eyona nto iphambili apha kukuzonwabisa nabathengi bakho. Abaxhasi abanamandla zizona zikhokelo ezilungileyo. Banokwabelana ngokuqonda okuvela kubasebenzisi bokwenyani abanokulungiswa ngokufanelekileyo. Kwimeko apho usebenzisa ukugxekwa kwabaxhasi njengomthombo wedatha ebalulekileyo ufumana onke amathuba okunyusa ingeniso kwaye uyenze ibe yinto ephambili
Ngaba ujonge ukukhulisa usetyenziso lwakho lweselfowuni? Nxibelelana nathi, Iisysbunny yinkampani yophuhliso lwesoftware efunwayo emva kokuba iphuhlise uyilo oluhle, kunye nokukhawulezisa ukuphuhliswa kwesoftware.
tags: Ivenkile yokudlala kaGoogleusetyenziso lweselulapapasha usetyenzisopapasha usetyenziso lweselfowunisysbunny